Bomag fingotra buffer
Miverena pulley ny fikosoham-bary milina. W100, w100H, W1000F, W1200F, W1900, W2000, W2100, W2200. Mba hahazoana antoka ambany-friction mivezivezy ny conveyor fehikibo. Mora detachable fifandraisana hanambara nanova-roller asa tsotra. Noho izany, ny fanaovana ny fehin-kibo conveyor afaka nibango avo conveyor fahafahana amin'ny fanjifàna ambany fahefana. Ny mora foana attachable pulley amin'ny Groove miasa miantoka ny fahafahan'ny conveyor kamo.
Miverena pulley ny fikosoham-bary milina. W100, w100H, W1000F, W1200F, W1900, W2000, W2100, W2200.
Mba hahazoana antoka ambany-friction mivezivezy ny conveyor fehikibo. Mora detachable fifandraisana hanambara nanova-roller asa tsotra. Noho izany, ny fanaovana ny fehin-kibo conveyor afaka nibango avo conveyor fahafahana amin'ny fanjifàna ambany fahefana. Ny mora foana attachable pulley amin'ny Groove miasa miantoka ny fahafahan'ny conveyor kamo.
Previous: foana pulley